Nkwupụta nke TOP 300 Site na Ndi Okike Amaghi ama maka oge 2020 - Pedia kwuru
359 ruturu na okwu
Oge ụfọdụ, anyị na-enwe nkụda mmụọ na anyị na-anabata ọdịda ahụ ọtụtụ ugboro tupu anyị adaa mba. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ọ dị mkpa na anyị na-akpali onwe anyị ma nwaa iji ikike anyi nile merie ihe isi ike niile.
O nweghi ihe dị na ndụ agaghị ekwe omume. Ọ bụ ihe niile banyere egwu nke zoro ezo n'ime anyị. Ozugbo anyị malitere ikwere n’onwe anyị ma nwee okwukwe n’ikike anyị nwere, anyị ji n’aka na anyị ga-eme ihe ma na-emeri.
Ndụ abụghị mgbe akwa nke Roses ma oge ihe siri ike ga-agafe ụzọ anyị, mana ọ bụ anyị niile ka etu anyị si ewere ọnọdụ ndị ahụ ma nwaa imeri ha.
Anyị ekwesịghị ịnabata ọdịda site na ohere ọ bụla. Kama anyị kwesịrị inwe okwukwe n ’ike anyị ma ghara ime ihere oge ịnwa oge ọzọ ọ bụrụgodi na anyị adaala na mbọnwa ikpeazụ.
Ọdịda na-abịakwute anyị oge anyị ịkwụsị ịnwale. Oge rue mgbe anyị ji obi anyị dum na-eme ihe anyị, anyị ga na-amụta oge ọ bụla anyị dara, mana oge anyị gọnarịrị, ọ bụ ọdịda anyị na-ezute.
N’ụdị ọnọdụ dị otu a, naanị okwu mmụọ nwere ike ime ka anyị na-akpụ akpụ sitere n’ọtụtụ ndị edemede amaghi ama onye n’eme ka anyi mata n’ezie nnwale.
Otherfọdụ ndị ọzọ Kwuru site na amaghi na-agwa anyị na anyị kwesịrị itinye onwe anyị n'ọrụ mgbe niile ma na-anwa imezu ebumnuche anyị nyefere onwe anyị. Ọ dị mkpa ịghọta na nrọ anyị niile ga-aga n'efu ma ọ bụrụ na anyị agaghị aga ma na-anwa imezu ha.
Ọ dịghị onye ga-emere gị ihe ọ bụla. N'ihi ya, ọ bụghị onye ọzọ ma ọ bụghị gị ga-emezu ebumnuche gị. Ọzọkwa, ịkwesịrị itinye ya ozugbo.
Onweghi ihe ana akpo ‘mgbe emechara’ dika ihe kariri mgbe obula. Ọ bụrụ n’inwela ọrụ ọ bụla iji dozie, ị kwesịrị ịmalite ịrụ ya ugbu a, ebe ọdịnweghị echi ị ga-eme ha.
Mụta na enwere ike ịnwe onye nkuzi karịa ndụ n'onwe ya. Ikwesighi ịkwụsị ịmụ ihe maka ndụ ga - etinye gị oge ọ bụla na itinye akwụkwọ na nyocha, ọ dị gị n'aka otu ị ga - esi jide ihe ọmụmụ ahụ.
Ọzọkwa, ịkwesịrị mụta ilekwasị anya na ebumnuche gị kama ịmachibido ihe na-abịa n'ụzọ gị. Ọ bụrụ n’ịnọ na-eleghara ihe mgbochi ndị ahụ anya, ị ga-ahapụ isi ihe gị lekwasịrị anya.
N’ihi ya, na-ele anya n’ihe mgbaru ọsọ i setịpụụrụ onwe gị, na ihe ịga nke ọma gaje ịbịakwute gị!
Kwere na ọ nweghị ihe agaghị ekwe omume. - Amaghi
Akwụsịla ịmụ ihe, n’ihi na ndụ anaghị akwụsị izi ihe. - Amaghi
Onye nkuzi kasịnụ nwere ike inwe bụ ndụ gị! Ihe omuma nwere ike ibia site na ebe obula. Anyị…
Isi ihe ga - eme ka ị nwee ihe ịga nke ọma bụ ilekwasị anya na ebumnuche, ọ bụghị ihe mgbochi. - Amaghi
Oge ụfọdụ, mgbe anyị na-anwa imezu ebumnuche anyị, anyị ga-aga ọtụtụ nsogbu. Na…
Obi ụtọ dị n'obi, ọ bụghị n'ọnọdụ ahụ. - Amaghi
Ọtụtụ ndị mmadụ na-echekarị na ndị ọzọ na-enwe obi ụtọ karịa ka ha nwere. Mgbe ọ bụla ha pịara na social media ha…
Ekwela ka ihe nzuzu mebie obi uto gị. - Amaghi
Na ndụ, ọ bụghị ihe niile kwesiri ịkwaga dịka ịchọrọ. A ga-enwe ụfọdụ ihe…
Edozila ego maka ihe ekwesighi. - Amaghi
Na-ekwu maka ọrụ ma ọ bụ mmekọrịta, ị ga-edozili maka ihe ọ bụla bara uru na-erughị ihe ị…
Nwee obi oma n’ebe ndị mmadụ nọ n’enweghị ihe kpatara ya. - Amaghi
Ebibila. Maghị ihe echi ga-eweta. - Amaghi
Gosiputa onwe gi, obughi ndi ozo. - Amaghi
Ihe ukwu abughi na mpaghara nkasi obi. - Amaghi
Anyi mara na nkasi obi bu otu n’ime ihe di nkpa nke ndu anyi. Ọ bụrụ na ị bụghị…
Nwee obi ụtọ, ọ bụghị n’ihi na ihe niile dị mma, kama n’ihi na ị nwere ike ịhụ ihe ọma n’ihe niile. - Amaghi
Ọ ga-esi ike, mana ike apụtaghị na ọ gaghị ekwe omume. - Amaghi
Ọ dị mma, anyị niile nwere ebumnuche na ndụ anyị. Anyị niile nwere nrọ dị iche iche…
Ezi ndi enyi bu ndi enyi rue ndu. - Amaghi
Ndị enyị. Onyinye kacha mma mmadu nwere ike inwe n’oge ndu ya. Ike nke inwe…
Oge ihe isi ike na-akụziri anyị ihe bara uru. - Amaghi
O nwere oge ndụ anyị oge anyị dara mba; anyị na-enwe nkụda mmụọ. E nwere oge na…
Gbanwee agwa gi ga - agbanwe ndu gi. - Amaghi
Ọkara nke gị ihe kpatara ọdịda bụ maka omume gị maka ndụ gị. I kwesiri igbanwe…
Achọpụtaghị ezi ịhụnanya. Ọ wuru. - Amaghi
Ọ dị mkpa ịghọta na achọtaghị ezi ịhụnanya. Ọ bụ ihe ịchọrọ iwu…
Ihunanya ekwesighi izu oke. Ọ dị ya mkpa ịbụ eziokwu. - Amaghi
Soro ndị ezigbo mmadụ nọrọ onwe gị. - Amaghi
Iche echiche ziri ezi anaghị eleghara nsogbu gị anya. O nwere obi ike n’ikike gị nwere ike ịnagide ha. - Amaghi
Dị ike ma na-amụmụ ọnụ ọchị na ndụ, ọbụlagodi na ọ na-afụ ụfụ mgbe ụfọdụ. - Amaghi
Activerụ ọrụ na ike na ndụ bụ otu n’ime ụzọ kachasị mma isi bie ndụ. Ọ bụrụ na ị bụghị…
Ekwela ka ihe gara aga gị gbuo ọdịnihu gị. - Amaghi
Anyị niile nwere akụkọ ndụ anyị. E nwere ọtụtụ ọrụ siri ike ọ bịara ka ọ bụrụ…
Mgbe ndụ tara akpụ, maa onwe gị aka ka sie ike. - Amaghi
Ndụ bụ ihe niile na - agafe nsogbu ndị ụbọchị. Ihe mgbochi ndị a abụghị ihe ọzọ ma bụrụ ihe mgbochi na nsogbu…
Ihe na-ewute gị taa na-eme ka ị sie ike echi. - Amaghi
Gaghị enwe ike ịmụ ihe site n’ịnọgide na mpaghara nkasi obi gị. I nwere ike imuta naanị mgbe ino…